Tonga dia manakona ny mahantra, mampahita lalana tsara, tonga dia mampivadika ho toy ny paradisa an’i Gasikara e ! Saika tsara aloha ilay izy raha nisy kely e ! Hainao ve anefa ny lesoka? Indrisy fa fanakonana ihany ilay izy e ! Ezaka kely fotsiny anie izany izao dia lasa fanafoanana e ! Izany izao no tena ilainay, solomaso manafoana ny fahantrana sy ny fahasahiranana. Hainao koa angamba ny tiako holazaina fa tsy eo akory dia mody fanina eo a ! Vita ihany ve rangahy ny nanadio fahatany ny tanàna toy izao tao anatin’ny volana vitsy sy ny nampiseho azy tamin’ireo namana avy any Dilambato, ho toy ny ireny efa mba tany miha mandroso ireny ! Dia maninona izao raha mba tena nampandrosoana araka ny tokony ho izy ny tanàna tao anatin’izay naha teo anareo efa ho telo taona izay ? Mba tsy azoko mihitsy kosa aloha ilay hevitrareo e ! Mbola misy roa taona farafahakeliny e !